Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada Xuquuqul Insaanka HRW oo sheegtay in Ethiopia waxba iska badalin
Hay’ada Xuquuqul Insaanka HRW oo sheegtay in Ethiopia waxba iska badalin
Posted by ONA Admin	/ October 4, 2012
Haayada xuquql Insaanka HRW ayaa sheegtay in raisal wasaarihi hore ee Ethiopia waxba iska badalin oo ninka cusub ee jagada qabsaday uu lamid yahay kii hore. waxayna beesha caalamka ku eedeysay in dhibaatada ka jirta Ethiopia si fiican looga warqabo balse caalamku waxba ka qaban.
Haayadan ayaa uga digtay beesha caalamka inaysan rajo ka qaadin isbadalka xilka ee ku yimid raisal wasaarihi hore ee dhintay oo booskiisi loo magacabay raisal wasaare cusub. Raysal wasaaraha cusub ayaa ah nin shaqadii hore ee Males fulinaya oo ay kamidtahay innu fuliyo tacadiyadi iyo xadgudubki uu ku kaci jiray Males Zenawi;.
HRW waxay ku eedaysay beesha caalamka gaar ahaan Bangiga Aduunka oo Ethiopia u oggolaaday lacag gaadhaysa 600 million oo Dolarka mareykanka ah lacagtaas oo noqonaysa mida ugu badan ee World bank u’ogolaaday Ethiopia. Wadamada Ree galbeedku waxay ka qeyb qaataan tacadiga ka socda Ethiopia oo lacagtaas la siiyo Ethiopia ayaa lagu waxyeelaya shacabka Ethiopia ayay haayadan ku nuuxnuuxasatay iyada oo cadeymo badan kasoosaartay.
Waxaa layaab leh in haayadaha UN’tu markasta oo aan baadhitaan sameynayno ay heshiis nala galaan xog badana ay nala wadagaan, markii aan xaqiiqda soo bandhigno haayadihi nala shaqeynayay ay nagaga baxaan cadeymihi oo ay dhahaan waxa ay HRW soo qortay ma jirto iyaga oo danahooda illaashanaya.
Qoraalkan HRW ay ku eedeynayso beesha Caalamka ayaa waxaa qoray xafiiska Human Right watch qeybta Africa ninka u qaabilsan oo lagu magacaabo Ben Lawrence waxaana si aad ah loogu dhaliilaya xidhiidhk wadamada deeqda bixiya iyo ethiopia ka dhaxeeya oo ah mid sababa cadaadinta shacabka Ethiopia.
guul ogaden insha allah says:
Ohhh ya allah that is sad news really allah give us freedom aamiin ya allah